အသက်ကြီးလာလေလေ သူငယ်ချင်းနည်းနည်းပဲရှိသင့်တဲ့ အကြောင်းတွေ – Trend.com.mm
Posted on March 24, 2018 March 19, 2018 by San Wadi Hnin
လူဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေရတယ်ဆိုတဲ့စကားလည်း အရှိသားမဟုတ်လား။ ဒီတော့ အပေါင်းအဖော်သူငယ်ချင်းတွေရှိသင့်တာဟာလည်း ငြင်းမရတဲ့အမှန်တရားပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်အပါအဝင် လူအများစုဟာ ငယ်တုန်းမှာသာ သူငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက်ကြီးရှိခဲ့ကြပေမယ့် အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ လူ့လောကကြီးထဲကို ကိုယ့်အင်ကိုယ့််အားကလေးနဲ့တိုးဝင်လာတာနဲ့အမျှ သူငယ်ချင်းအရေအတွက်ဟာ အချို့ဆို လက်ချိုးရေလို့ရလောက်အောင် အချို့ဆို လက်ချိုးရေစရာမလိုတော့လောက်အောင်(တစ်ယောက်ပဲရှိရင် ဟိုဘက်ကရေလည်း ဒီတစ်ယောက်ပဲ၊ဒီဘက်ကရေလည်း ဒီတစ်ယောက်ပဲလေ ဘာလို့လက်ထောင်နေတော့မလဲ)နည်းပါးလာတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ငါငယ်ငယ်တုန်းကသူငယ်ချင်းများခဲ့ရဲ့နဲ့ ခုတော့ ဘာလို့ သူငယ်ချင်းတွေနည်းသွားရတာလဲလို့တွေးမိပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အချိန်တွေလည်း ရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ သူငယ်ချင်းနည်းတာကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့််လဲဆိုတော့….
ဒါကတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါ။ အချိန်ဆိုတာ ရွှေနဲ့စက်ဝယ်လို့တောင်မရဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးကြားဖူးကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလို ရွှေလိုစိန်လိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို သူငယ်ချင်းအမည်ခံ ကိုယ်နဲ့သိပ်မရင်းနှီးတဲ့သူတွေအများကြီးနဲ့ ဖြုန်းပစ်မယ့်အစား ကိုယ့်အကြောင်းတကယ်ကိုိခရေစေ့တွင်းကျ အပ်ကျမတ်ကျသိပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုအတွင်းကျကျနားလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်နဲ့သာဖြတ်သန်းလိုက်တာက ပိုပြီး အကျိုးရှိစေမှာပါ။
ဒါက သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနည်းနည်းပဲရှိတဲ့သူတွေပဲရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပါ။ ဟိုသူငယ်ချင်းကတော့ဖြင့်လာလည်ပြန်ပြီ၊ဟိုသူငယ်ချင်းမိသားစုကညအိပ်ညနေလာနေပြန်ပြီ၊ဘယ်သူ့သားလေးကတော့ဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်သွားပြန်ပြီ စသဖြင့် ကိစ္စများမြောင်လူတို့ဘောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမရိုးနိုင်တဲ့ လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်စိတ်ရှုပ်ရတာတွေ စိတ်ပူပန်ရတာတွေမရှိတာ သိပ်ကိုနေလို့ကောင်းတဲ့ အချက်ပါ။ နောက်ပြီး ကိုယ်တကယ်ခင်မင်တဲ့လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့သူငယ်ချင်းအနည်းငယ်ကိုလည်း စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးပေါင်းသင်းနိုင်ဂရုစိုက်ပေးနိုင်တာကြောင့် ဒါကလည်း အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အချက်တွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။လူဆိုတာ အသက်ကြီးလာလေလေ အေးအေးဆေးဆေးနေချင်လာလေလေ၊ကိုယ်ပြုထားမိတဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေက ဒွေးရောယှက်တင်ရစ်ပတ်ပြီး လူမှုရေးသံသရာကြီးထဲက ရုန်းမထွက်နိုင်လေလေပါပဲ။
အထူးသဖြင့််မိန်းကလေးတွေမှာပိုသိသာပါတယ်။ အချို့မိန်းကလေးတွေဆို စကားရှုပ်တဲ့ကိစ္စကြောင့် မိန်းကလေးအချင်းချင်းမပေါင်းပဲ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပေါင်းတာတွေတောင်ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်တို့မိန်းကလေးတွေဝန်ခံရမှာ မုန်းပေမယ့်လည်း မိန်းကလေးတွေက များသောအားဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေထက် စကားရှုပ်တတ်ကြတာ ဟိုစကားဒီပို့လုပ်တတ်ကြတာအမှန်ပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေသိပ်များတဲ့အခါ လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေက ပါလာမှာဖြစ်သလို လူတွေအများကြီးကိုဖြန့်ပြီးပေါင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်း စိတ်နှစ်ပြီးပေါင်းသလို တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်အကုန်မသိနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီ့အခါ သူငယ်ချင်းထဲကပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်လူတစ်ယောက်ယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကို ဂုန်းတိုက်မယ်ဆိုသိပ်လွယ်သွားပါပြီ။ သူငယ်ချင်းသိပ်များခြင်းဟာ မလိုလားအပ်တဲ့လူမှုရေးအရှုပ်အထွေးတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တာမို့ သူငယ်ချင်းနည်းနည်းပဲထားပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းနေတာက ပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်ဆံတဲ့ နေရာမှာ ဖြစ်လာစရာပြဿနာတွေက အများကြီးပါ။ အမျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လှုမှုရေးအရှုပ်အထွေးတွေ ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာတွေ အစရှိသဖြင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကိုကြောက်ပြီး လူနေမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့အဝေးမှာနေမယ်ဆိုရင်လည်း တောင်ထိပ်မှာ တဲသွားထိုးပြီးနေဖို့ပဲရှိတော့မှာပဲလို့ ဘုပြောရင်ပြောနိုင်စရာရှိပါတယ်။ဆိုလိုတာက ကိုယ်နဲ့အနီးအနားမှာ ဗုံးပေါက်တာထက် ကိုယ်နဲ့ခပ်ဝေးဝေးမှာပေါက်တာကပိုကောင်းတယ်ဆိုသလိုပဲ ပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့ လူတွေကို ကိုယ့်အနီးမှာမထားပဲ ကိုယ်အမှန်တကယ်သိတဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုပဲထားခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်အေးချမ်းသာအောင်ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
သင့်မှာ သူငယ်ချင်းနည်းနည်းပဲရှိလို့ စိတ်ပျက်မနေနဲ့နော်။ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းနည်းနည်းလေးက ကိုယ်နဲ့အကြောင်းသိတဲ့စိတ်သဘောခြင်းတူညီတဲ့ ရင်ဘတ်ချင်းထပ်တူကျတဲ့သူဟုတ်မဟုတ်ပဲ သတိထားဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့အကြံပြုပါရစေ။
လူဆိုတာပတျဝနျးကငျြနဲ့နရေတယျဆိုတဲ့စကားလညျး အရှိသားမဟုတျလား။ ဒီတော့ အပေါငျးအဖျောသူငယျခငျြးတှရှေိသငျ့တာဟာလညျး ငွငျးမရတဲ့အမှနျတရားပဲပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျအပါအဝငျ လူအမြားစုဟာ ငယျတုနျးမှာသာ သူငယျခငျြးအုပျစုလိုကျကွီးရှိခဲ့ကွပမေယျ့ အသကျရလာတာနဲ့အမြှ လူ့လောကကွီးထဲကို ကိုယျ့အငျကိုယျ့အားကလေးနဲ့တိုးဝငျလာတာနဲ့အမြှ သူငယျခငျြးအရအေတှကျဟာ အခြို့ဆို လကျခြိုးရလေို့ရလောကျအောငျ အခြို့ဆို လကျခြိုးရစေရာမလိုတော့လောကျအောငျ(တဈယောကျပဲရှိရငျ ဟိုဘကျကရလေညျး ဒီတဈယောကျပဲ၊ဒီဘကျကရလေညျး ဒီတဈယောကျပဲလေ ဘာလို့လကျထောငျနတေော့မလဲ)နညျးပါးလာတတျကွပါတယျ။ တဈခါတဈလမှော ငါငယျငယျတုနျးကသူငယျခငျြးမြားခဲ့ရဲ့နဲ့ ခုတော့ ဘာလို့ သူငယျခငျြးတှနေညျးသှားရတာလဲလို့တှေးမိပွီး စိတျမကောငျးဖွဈမိတဲ့အခြိနျတှလေညျး ရှိမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ တကယျတမျးမှာတော့ သူငယျခငျြးနညျးတာကောငျးပါတယျ။ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့….
ဒါကတကယျအရေးကွီးတဲ့အခကျြပါ။ အခြိနျဆိုတာ ရှနေဲ့စကျဝယျလို့တောငျမရဘူးဆိုတဲ့စကားမြိုးကွားဖူးကွတယျမဟုတျလား။ဒီလို ရှလေိုစိနျလိုတနျဖိုးရှိတဲ့အခြိနျတှကေို သူငယျခငျြးအမညျခံ ကိုယျနဲ့သိပျမရငျးနှီးတဲ့သူတှအေမြားကွီးနဲ့ ဖွုနျးပဈျမယျ့အစား ကိုယျ့အကွောငျးတကယျကိုခရစေတှေ့ငျးကြ အပျကမြတျကသြိပွီး ကိုယျ့စိတျကိုအတှငျးကကြနြားလညျတဲ့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျသုံးယောကျလောကျနဲ့သာဖွတျသနျးလိုကျတာက ပိုပွီး အကြိုးရှိစမှောပါ။
ဒါက သူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျးနညျးနညျးပဲရှိတဲ့သူတှပေဲရနိုငျတဲ့အခှငျ့အရေးပါ။ ဟိုသူငယျခငျြးကတော့ဖွငျ့လာလညျပွနျပွီ၊ဟိုသူငယျခငျြးမိသားစုကညအိပျညနလောနပွေနျပွီ၊ဘယျသူ့သားလေးကတော့ဖွငျ့မင်ျဂလာဆောငျသှားပွနျပွီ စသဖွငျ့ ကိစ်စမြားမွောငျလူတို့ဘောငျဆိုတဲ့အတိုငျးမရိုးနိုငျတဲ့ လူမှုရေးကိစ်စတှအေတှကျစိတျရှုပျရတာတှေ စိတျပူပနျရတာတှမေရှိတာ သိပျကိုနလေို့ကောငျးတဲ့ အခကျြပါ။ နောကျပွီး ကိုယျတကယျခငျမငျတဲ့လကျခြိုးရလေို့ရတဲ့သူငယျခငျြးအနညျးငယျကိုလညျး စိတျရောကိုယျပါနှဈပွီးပေါငျးသငျးနိုငျဂရုစိုကျပေးနိုငျတာကွောငျ့ ဒါကလညျး အပေါငျးလက်ခဏာဆောငျတဲ့အခကျြတှထေဲကတဈခုပါပဲ။လူဆိုတာ အသကျကွီးလာလလေေ အေးအေးဆေးဆေးနခေငျြလာလလေေ၊ကိုယျပွုထားမိတဲ့လူမှုရေးကိစ်စတှကေ ဒှေးရောယှကျတငျရဈပတျပွီး လူမှုရေးသံသရာကွီးထဲက ရုနျးမထှကျနိုငျလလေပေါပဲ။
အထူးသဖွငျ့မိနျးကလေးတှမှောပိုသိသာပါတယျ။ အခြို့မိနျးကလေးတှဆေို စကားရှုပျတဲ့ကိစ်စကွောငျ့ မိနျးကလေးအခငျြးခငျြးမပေါငျးပဲ ယောကျြားလေးတှနေဲ့ပေါငျးတာတှတေောငျရှိပါတယျ။ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကိုယျတို့မိနျးကလေးတှဝေနျခံရမှာ မုနျးပမေယျ့လညျး မိနျးကလေးတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ ယောကျြားလေးတှထေကျ စကားရှုပျတတျကွတာ ဟိုစကားဒီပို့လုပျတတျကွတာအမှနျပါပဲ။ သူငယျခငျြးတှသေိပျမြားတဲ့အခါ လူအမြိုးမြိုးစိတျအထှထှေကေ ပါလာမှာဖွဈသလို လူတှအေမြားကွီးကိုဖွနျ့ပွီးပေါငျးရမှာဖွဈတဲ့အတှကျ တဈယောကျတညျးနှဈယောကျတညျး စိတျနှဈျပွီးပေါငျးသလို တဈယောကျအကွောငျးတဈယောကျအကုနျမသိနျိုငျပါဘူး။အဲ့ဒီ့အခါ သူငယျခငျြးထဲကပဲဖွဈဖွဈ အပွငျလူတဈယောကျယောကျကပဲဖွဈဖွဈ သူငယျခငျြးတဈယောကျယောကျနဲ့ကိုယျနဲ့ကို ဂုနျးတိုကျမယျဆိုသိပျလှယျသှားပါပွီ။ သူငယျခငျြးသိပျမြားခွငျးဟာ မလိုလားအပျတဲ့လူမှုရေးအရှုပျအထှေးတှကေိုလညျးဖွဈစနေိုငျတာမို့ သူငယျခငျြးနညျးနညျးပဲထားပွီး အေးအေးခမျြးခမျြးနတောက ပိုကောငျးတယျလို့ဆိုရမှာပါ။
လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျဆကျဆံတဲ့ နရောမှာ ဖွဈလာစရာပွဿနာတှကေ အမြားကွီးပါ။ အမြိုးစုံဖွဈနိုငျပါတယျ။ လှုမှုရေးအရှုပျအထှေးတှေ ငှရေေးကွေးရေးပွဿနာတှေ အစရှိသဖွငျ့ပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒါတှကေိုကွောကျပွီး လူနမှေုအဖှဲ့အစညျးနဲ့အဝေးမှာနမေယျဆိုရငျလညျး တောငျထိပျမှာ တဲသှားထိုးပွီးနဖေို့ပဲရှိတော့မှာပဲလို့ ဘုပွောရငျပွောနိုငျစရာရှိပါတယျ။ဆိုလိုတာက ကိုယျနဲ့အနီးအနားမှာ ဗုံးပေါကျတာထကျ ကိုယျနဲ့ခပျဝေးဝေးမှာပေါကျတာကပိုကောငျးတယျဆိုသလိုပဲ ပွဿနာဖွဈနိုငျတဲ့ လူတှကေို ကိုယျ့အနီးမှာမထားပဲ ကိုယျအမှနျတကယျသိတဲ့ ရငျးနှီးတဲ့သူတှကေိုပဲထားခွငျးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျစိတျအေးခမျြးသာအောငျကာကှယျနျိုငျမှာပါ။
သငျ့မှာ သူငယျခငျြးနညျးနညျးပဲရှိလို့ စိတျပကျြမနနေဲ့နျော။ရှိတဲ့သူငယျခငျြးနညျးနညျးလေးက ကိုယျနဲ့အကွောငျးသိတဲ့စိတျသဘောခွငျးတူညီတဲ့ ရငျဘတျခငျြးထပျတူကတြဲ့သူဟုတျမဟုတျပဲ သတိထားဆနျးစဈကွညျ့ဖို့အကွံပွုပါရစေ။